Waxay Badbaadisay Ciidankeeda! - Xogside
Home WARARKA CAALAMKA Waxay Badbaadisay Ciidankeeda!
Waxay Badbaadisay Ciidankeeda!
dhaarahan waxaad heli doontaa arimo badan oo aanad ku farax doonin oo dhinacayga ah. Haddii aad awoodo iisoo dir toobkaygii doogada ahaa iyo sharabaadaydii cadcadaa. Waxaan rabaa inaan si fiican usii lebisto marka aan halkan ka tegayo” , Fariintaasi ayaa muujinaysay inay qirasan tahay denbigeeda. Masha Brukina waxay dhalatay 26 October , sanadkii 1924, waxay ahayd Ruush laakiin asalkeedu wuxu ahaa Yuhuud. Sanakii 1941 iyadoo 17 sano jirtay ayay xubin ka ahayd Ururkii Yuhuudda deganayda Minsk oo ah magaalada caasimadda u ah Bellarusia.
Markii uu dagaalkii labaad socday waxay si samafal ah ugu shaqayasay kalkaaliso caafimaad iyadoo ka hawlgashay Isbitaalkii Polytechnic Institute hospital ee ku yaallay Jarmalka oo wakhtigaasi la dhigi jiray dhaawicii askarta ciidankii Ruushka ee lagu magacaabi jiray Ciidanka cas (Red Army). Ujeedada ay sida samafalka ugaga shaqaynaysay Isbitaalkan ayaa ahaa sidii ay ciidanka maxaabiista ah u badbaadin lahayd.
Ka sakow daawada iyo daryeelka ay siinaysay ciidankaasi dhaawac ah ee haddana maxaabiista ah, waxay ka caawin jirtay sidii ay u baxsan lahaayeen, waxayna ku tahriibin jirtay iyadoo siin jirtay dhar shacab oo ay xidhaan iyo waraaqo aqoonsi dhakhtar oo been abuur ah oo muujinaya inay yihiin shicib dagaalada ku waxyeeloobay si fiican ayayna hawshaasi u gudatay.
Wakhti danbe ayuu Qof bukaan jiif ah oo Jarmal ahi fashiliyay sirta ay ku shaqayso gabadha Masha, waxaana uu u sheegay ciidankii Jarmalkii isagoo weydiiyay gabadha Masha Bruskina maxay qabataa? Maxaadse ka warhaysaan?, Waar waa gabadh ciidan ah.
Sirdoonka Jarmalka ayaa qabtay bishii October 14-keedi sanadkii 1941. Gabadha Masha Waxay ahayd gabadh ka tirsanayd ciidanka Wehrmacht 707 ee guutada lugta (infantry) ee Jarmalka oo dagaalka kaga jiray jihada bariga, laakiin ahayd basaasad qalbi adag oo Ruushka u shaqaysa.
Isla Markii la qabtay waxay warqad u qortay hooyadeed waxayna ku tidhi :” Aad ayaan uga dhibaatoonayaa inaan sabab u noqday inaan idinku abuuro werwer iyo walbahaar badan. Laakiin aniga dhinacayga wax xumi iguma dhicin. Dhibta i haysata waa werwerkiina.
Waxayna ahayd basaasad da’yar oo Ruush oo qalbi adag , oo badbaadisay tiro badan oo ka tirsanaa ciidankii Red army ee Ruushka ee dhaawaca lagu soo qabtay. Waxaana Jarmalku deldeleen maalin Axad ah bishii October 26, sanadkii 1941.
Previous articleDugsiga Ayeeyooyinka Dhigtaan
Next articleGuddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta dhaariyay xubnihii ku soo baxay doorashadii golaha Wakiillada JSL.